Manenjika ireo mpanohitra ara-politika i Hong Kong amin’ny alàlan’ny fanakatsoana ny kaonty any amin’ny banky. · Global Voices teny Malagasy
'Tsy isalasalana fa hetsika valifaty politika io.'
Voadika ny 28 Febroary 2021 7:17 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Français, Ελληνικά, Dansk, polski, English
Sary fanentanana hanaovana ankivy ny HSBC, niely be tao amin'ny media sosialy.
Ny lalàna momba ny fiarovana nasionaly napetraka vao tsy ela tao Hong Kong, no nanome hery ny mpitandro ny filaminana hampikatso ny kaonty banky an’ireo voarohirohy mandritra ny famotorana iray, izay anisan’ny nanimba ny fahatokisan'ny besinimaro ny rafitry ny banky.
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay, betsaka ireo tranga manondro fa nampiasain’ireo mpitandro filaminana ao amin'ny firenena ny rafitry ny banky ho toy ny fiadiana hamoretana ireo mpikatroka sy ireo ONG mpanohana ny demokrasia.
Tranga nampiady hevitra be indrindra ny fampikatsoana ny kaonty bankin'i Ted Hui, ilay mpanao lalàna ao Hong Kong, sy ny fianakaviany, izay miaina any an-tsesitany.
Nambaran'i Hui, mpanao lalàna mpanohana ny demaokrasia teo aloha, ny maha-olona miaina an-tsesitany azy nandritra ny fitsidihany tany Danemarka hanao kaonferansa ny 3 Desambra, taorian'ny nandaozan'ny fianakaviany ihany koa an'i Hong Kong. Roa andro taty aoriana, tamin'ny 5 Desambra, nilaza i Hui fa ny kaontiny any amin'ny banky sy olona 5 farafakeliny ao anatin'ny fianakaviany no nakatso tsy nisy fanazavana avy amin'ireo banky maro, anisan'izany ny HSBC.
Nakatson'ny HSBC ny kaontin'i Ted, ilay mpanao lalàna teo aloha miaina an-tsesitany, sy ny an'ireo fianakaviany. Hamorain'ny HSBC ny fanenjehana ara-politika ataon'ny Antoko Kaoministra Shinoa, izay manohintohina ireo tsy mitovy firehana politika aminy, ary ny manafintohina, dia ny an'ny fianakavian'izy ireny. Mila mihetsika ny governemanta britanika ka tsy haneho fandeferana amin'ny firaisana tsikombakomba amin'ny tsy refesi-mandidy. pic.twitter.com/XRdOWSYbjr
— Nathan Law 羅冠聰 ? (@nathanlawkc) 5 Desambra 2020
Niteraka korontana ho an'ny besinimaro ny fihetsika nataon’ilay banky goavana, satria fantatra fa tsy nanitsakitsaka akory ny lalàna mifehy ny filaminam-pirenena ny mpikambana ao amin'ny fianakavian'i Hui. Nilaza ny mpitsikera fa antony ara-politika no niasan'ny banky, fa tsy araka ny lalàna. Naverin’ny banky nosokafana kosa ny kaontin'i Hui sy ny fianakaviany ny ampitson'io, ary naverin’izy ireo nakatso indray izany ny 7 Desambra, taorian'ny namoahan'ny polisy tao Hong Kong fanambarana ampahibemaso niampangana an'i Hui ho mpiray tsikombakomba amin'ny hery vahiny sy ny fampiasana ny kaonty bankin'ny fianakaviany ho famotsiana vola.
Toy izao manaraka izao no namintinan'i Timothy McLaughlin, mpanao gazety tsy miankina, ny fiampangan'ny polisin’i Hong Kong an'i Hui:
“Nambaran’i Li fa ny antso ataon'olona sasany hangatahana ny fanohanan'ny vondrona iraisam-pirenena dia fiaraha-miasa amin'ny hery avy any ivelany, heloka bevava ao amin'ny lalàna fiarovana nasionaly izany, izay napetrak'i Beijing tany Hong Kong ny 30 Jona.” https://t.co/BgA3tcKNkJ
— Timothy McLaughlin (@TMclaughlin3) 7 Desambra 2020
Tany am-boalohany, heloka bevava miisa sivy no nanenjehana an'i Ted Hui ; anisan'izany ny fanakorontanana ireo fivoriana tao amin'ny Filankevitra Mpanao Lalàna, fandrauisany anjara tamina hetsi-panoherana tsy ara-dalàna, ary famafàna ny sary tao amin'ny findain'ny mpiasan'ny Filankevitra Mpanao Lalàna. Tsy misy ifandraisany amin'ireo fandikan-dalàna voatanisa ao amin'ny lalàna nasionaly momba ny fiarovana sy famotsiana vola ireo fiampangàna ireo, raha tsy taorian'ny nanambaran'i Hui ny sata maha-olona miaina an-tsesitany azy.
Ny fiampangana vaovao nataon'ny polisy dia nanondro ny fampielezankevitra iray ho fanangonam-bola ifotony hampidirana fitoriana hanenjehana ny mpamily taxi iray izay nanitsy tany amin'ireo marobe mpanao fihetsiketsehana, ary ny polisy iray izay nitifitra faran'izay akaiky ny mpanao fihetsiketsehana iray tao amina hetsi-panoherana iray nandritra ireo hetsika tamin'ny herintaona ho fanoherana ny fanolorana olo-meloka. Raha ny marina, Raha ny marina, ilay fanentanana fitadiavam-bola ifotony dia kabinetra iray iasana mpisolo vava no nanao azy, izay tsy misy ifandraisany amin'i Hui na amin'ny fianakaviany. Nanakiana ny polisy tao amin'ny Facebook i Hui:
Mazava be ny fikasàn'ny fitondrana hamaly faty, amin'ny famoretana ara-toekarena, sy ny fampiasàna sazy iraisana hampijaliana ny fianakaviako mba hanenjehana ireo feo tsy mitovy hevitra aminy.
Eo ambanin'ny filaminam-pirenena anefa, omena fahefana hanakatso kaonty any amin'ny banky mandritra ny famotorana ny mpitandro filaminana, tsy ilàna didim-pitsarana, ary tsy misy mihitsy lalaln-kivoahana ho an'ny olona voakasiky ny fihetsika toy izany.
Na eo aza ny ahiahin'ny besinimaro momba ny fampiharana fahatany ny fahefana ataon'ny polisim-pirenena, ny governemantaan’i Hong Kong dia nandà tsy hamaly ireo fanontaniana raha toa ny fahafahan'ny polisy mangataka ny fanakatsoana ny kaonty banky ka mety hanimba ny fahatokisan'ny besinimaro ny rafitry ny banky ao Hong Kong, ivontoerana ara-bola manerantany.
Ny tranga farany dia mikasika ny fanakatsoana kaonty any amin'ny banky nihatra tamin'ny Fiangonana ‘’ Good Neighbor North District’’ ary koa ny kaonty manokana an'ny pasiteran'ilay fiangonana, Roy Chan, sy ny vadiny. Mpampiasa Twitter Karen Tse no nitatitra ny vaovao taorian'ny nivoahany:
Nakatso tsy nisy fampandrenesana na fanamarinana nomena mialoha ny kaonty bankin'ny fiangonana ‘’Good Neighbor North District’’ tao amin'ny banky HSBC. Nakatso ihanty koa ny kaonty manokana an'ny pasitera Roy Chan sy ny vadiny. Mpikarakara ny vondrona Arovy ny Ankizy i Roy Chan.
Sary: FB/NYT pic.twitter.com/V9yx03RmIt
— Karen Tse (@ktse852) 7 Desambra 2020
Niorina tamin'ny 2014 ny fiangonana ary nahazo sata ho mpanao asa soa tamin'ny taona 2016. Hatramin'ny niorenany, nanome fialofana ho an'ireo tsy manan-kialofana izy. Nofaritan'ny fiangonana ho toy ny “hetsika valifaty politika” ny fankatsoana ny kaonty tokana an'ny fiangonana:
This is no doubt an act of political retaliation. In the past year, our group “Safeguard Our Generation” mainly comprised of middle-aged and elderly volunteers was determined to offer humanitarian aid to protestors at the frontline….
Tsy isalasalana fa hetsika valifaty politika io. Tamin'ny taona lasa, ny vondrona ” Vonjeo ny taranatsika” izay matetika misy mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny taona antonony sy olona efa nahazo taona dia tapa-kevitra fa hanome fanampiana noho ny maha-olona ho an'ireo mpanao fihetsiketsehana eo amin'ny laharana voalohany…
Nanentana ny HSBC ny fiangonana mba hanokatra indray ilay kaontiny tokana ao amin’ilay banky, satria ny tsy fanaovany izany dia hampitsahatra tanteraka ny fikarakaran’izy ireo ny tsy manan-kialofana.
Mitombo isa ny feo ao amin'ny media sosialy ao Hong Kong, izay mampiasa ny tenifototra #boycottHSBC hanehoana ny tsy fahatokisany ilay vondrona banky goavana.
Rehefa ny fitiavam-bola tafahoatra no mandresy ny soatoavina fototra maha-olona.
— Laurent Clark (@Laurent_Clarkk) 6 Desambra 2020
‘Ndao hanao izay hahamendrika antsika
— Arne Melsom ???? (@melsom62) 5 Desambra 2020
Ny volana aogositra, nakatson’ny HSBC ny kaonty banky manokana an'i Jimmy Lai, mpanorina ny Apple Daily, ary mpitantana ambony tao amin'ny foiben'ilay orinasan-gazety malaza Next Digital, taorian'ny fisamborana azy ireo noho ny fanakorontanana ny filaminam-pirenena, hosoka ary ireo lazaina fa fandikandalàna hafa.
Ny Jona 2020, talohan'ny nandaniana ny lalàna momba ny filaminam-pirenena, ny Fikambanan'ny Banky ao Hong Kong dia namoaka fanambarana manohana ilay lalàna, tamin'ny filazàna fa hampisy fahamarinan-toerana ho an'ny tontolon'ny asa aman-draharaha ilay lalàna. Nanaraka izany ireo goavan'ny Banky erantany, HSBC sy ny Standard Charter, ary namoaka ny fanambaràna fanohanany manokana.